कैलाली बम विस्फोटको घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको विप्लव समूहको दाबी
साउन २, २०७६
काठमाडौं– नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव समूहले कैलाली बम विस्फोटको घटनामा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममा घटनामा विप्लव समूहको हात रहेको आशंकासहितको समाचार आएको अवस्थामा विप्लव समूहले यस्तो दाबी गरेको हो ।
नेकपा कैलालीका जिल्ला सेक्रेटरी प्रकाश मल्लले कैलाली विष्फोटको घटनामा नेकपाको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘कहीँ विस्फोट तथा आतंक हुँदा सिधै हाम्रो पार्टीको नाम जोड्ने र बदनाम गर्ने सरकारो नीति छ । अनावश्यक रूपमा हामीलाई मुछेर बदनाम गर्ने सरकारको नीति बन्द गरियोस् ।’
विस्फोट गराउने नीति आफ्नो पार्टीको नभएको पनि उनले बताए ।
धनगढीमा बिहीबार बेलुका बम बिस्फोट हुँदा ५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । धनगढीको शहिद गेटस्थित निलम होटलमा बम विष्फोट भएको हो ।
बम विष्फोटमा परी होटल सञ्चालक केशवराज पाण्डे, बझाङ घर भएका राम सिंह, जितेन्द्र यादव, मोविन खान र लक्ष्मण सेरेला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भैरहेको उनीहरुको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेतले जनाए । घाइतेको शरीरको अधिकांश भाग जलेको जनाइएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त तस्बिरमा पनि उनीहरुको शरीका अधिकांश जलेको देख्न सकिन्छ । तस्बिरले नै बम विस्फोट निकै शक्तिशाली रहेको जनाउँछ ।
त्यस्तै, घटना स्थलमा पेस्तोल समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनावारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
साउन २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य बाहिर प्रचार गरेजस्तो बिग्रिएको छैन - प्रवक्ता बाँस्कोटा
विप्लव समूहका ७१ वर्षीय वृद्ध नेता पक्राउ
प्रचण्ड र माधव नेपालबीच खुमलटारमा २ घण्टा छलफल, ओलीसँगको भनाभनपछि सम्झाउने प्रयास !
जयशंकरलाई भेट्न प्रचण्डद्वारा अस्वीकार, ओली–नेपाल विवाद उत्कर्षमा
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ३५ निर्णय [सूचीसहित]
सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न : को राजा ? लावण्य देशको ?